Ciidanka Xoogga Dalka iyo AMISOM oo ka qayb qaadanaysa samata bixinta Dadkii ay saameeyeysay fatahaadda Webiga Shabeelle – Radio Muqdisho
Ciidanka Xoogga Dalka iyo AMISOM oo ka qayb qaadanaysa samata bixinta Dadkii ay saameeyeysay fatahaadda Webiga Shabeelle
Ciidamada nabad ilaalinta Dalka Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM ayaa sheegay inay Magaalada Baladweyne ka daad gureeyeen 10,000 oo Qoys oo ay saameysay fatahaadda Webiga Shabeelle.
Ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, ayaa sidoo kale waxaa howl-galladan lagu samata bixinayo Dadka ay saamaysay fatahaaddu ku wehliya Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Waxanay sidoo kale halkaasi ka wadaan Ciidamadu caawinta Dadka jilicsan ee aan Biyaha ka bixi karin iyo gaarsiinta gargaarka Bini’aaddan-nimo ee ay halkaasi geynayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha sama falka.
Taliyaha Ciidanka Jabuuti ee Gobolka Hiiraan Col; C/raxmaan Riyaale Xareed, ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan howlaha ay ku samata bixinayaan Dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay fatahaaddu.
“Waxba kama beddeli doonno dedaallada yada ku aaddan samata bixinta Dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobay fatahaadda , kuwaasoo ku dhibaataysan degaanka Ceel jaallae” ayuu yidhi Col; Xareed.
Col: C/raxmaan Riyaale Xareed ayaa intaa ku daray in loo baahan yahay taageero dheeri ah, wuxuuna sheegay inaysan Dadku haysan Biyo nadiif ah iyo Cunno toona.
Magaalada Baladweyne oo 335 Km dhanka Waqooyi kaga beegan Magaalada Muqdisho ayaa ah halka ugu daran ee ay waxyeellada ba’an u geysatay Biya baxadu, markii uu karkaarrada jabsaday Webiga Shabeelle, taasoo ay sababeen Roobab lixaad leh oo ka da’ay Soomaaliya iyo Itoobiya.
Isha/ Daily Nation
Wasiir Iidaan “Warbaahinta Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa 3-da May maalinta xorriyadda hadalka
Madaxweynaha Kenya oo balan qaaday inuu sii wadi doono dadaalada nabad raadinta Soomaaliya